Obbo Xahaa Mohammad Abbaa Shamsaddiin Xahaa kan ta’an “maalif dhaqxee ilma kee dubbiste?” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Xahaa Mohammad Abbaa Shamsaddiin Xahaa kan ta’an “maalif dhaqxee ilma kee dubbiste?”
Obbo Xahaa Mohammad Abbaa Shamsaddiin Xahaa kan ta’an “maalif dhaqxee ilma kee dubbiste?”
Qamadii haamuuf ganamaan ba’anii beela’nii garaa ciniinnaan yommuu isaan rakkisu!
jechuun Godina Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Gaadulloo jedhamutti poolisii humna addaa Oromiyaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaatiin qabamanii hidhamuu maatiin OMN-tti himan.
Maatiin isaa kun akka OMN-tti himanitti, sababni Obbo Xahaa Mohammad hidhamaniif, ilma isaanii Shamsaddiin Xahaa kan Finfinneetti hidhamee jiru dhaqanii waan dubbisaniif qofa.
Birmannaa hawaasa Naannoofi faccisa Obbo Xahaa booda garuu, maqaa “meeshaa hayyama hin qabne qabda” jedhuun sababa to’atamuu isaanii poolisiin maatitti himuu miseensi maatiisaanii OMN dubbise tokko ni dubbatti.
“Haragee Lixaa Aanaa Daaroo Labuutti Meeshaa Hayyama qabu hawaasni qabaachuun waan haaraa osoo hin taanee Aadaadha” kan jettu, maatiin nama kanaa, Obbo Xahaa hayyama meeshaa qabanii yeroo waajjira poolisiitti dhiheessanis ‘dhimmichi sichi qoratamaa’ jechuun alatti furmaatni addaa nuuf kenname hin jiruu jechuun, Obbo Xahaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu himti.
Ilmi isaanii Obbo Shamsaddiin Xahaa ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa booda kan to’atame yoo ta’u, reebicha qaamolee mootummaatiin isarratti raawwateen gurrisaa miidhamuu OMN gabaasaa turuun ni yaadatama.
“Abbaan booka dhugeef, ilma Afaan hin urgaa’uu” jettee kan mammaaktu miseensi maatii namaa kanaa “Abbaan Obbo Shamsaddiin Xahaa sababa ilma isaanii hidhaa jiru Finfinnee deemuun dubbisaan qofaaf, umurii dullumaatiin hidhamanii hiraarfamaa jiraachuun bu’ura seeraas hin qabu, jetti.
Obbi Xahaa Mohammad maanguddoo jaarsa biyyaa yeroo ta’an, Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Gaadullootii qabamanii, Waajjira poolisii Magaalaa Miicata keessatti hidhamanii jiru.